Anyị abịawo a ogologo ụzọ mgbe ọ na-abịa na-akpakọba music. N'afọ ndị 1990, otu n'ime ndị na-ewu ewu ụdị faịlụ formats maka na ịchekwa music bụ Midi na ị ka na-ahụ Midi mgbe ụfọdụ, n'ụdị ụdaolu nke gị ntị.
Midi, nke anọchi Musical Instrument Digital Interface, bụ oru usoro maka music. Ọ bụ otu n'ime ndị kasị oge ochie formats na ụwa nke dijitalụ media. Ọ kwere a dịgasị iche iche nke dijitalụ ngwá na-ewetara ha musing na dijitalụ usoro nke Midi. Nke a technology e etozu na 1983 otu ìgwè nke music ụlọ ọrụ na-anọchite anya na nọgidere na Emmanuel (Midi Manufacturers Association). Ọ rụrụ nnukwu uru n'oge ahụ n'ihi na ihe dum song e coded eji naanị narị ole na ole edoghi na ole na ole kilobytes. Otú ọ dị, na oge na-Midi faịlụ furu efu ebube ya dị ka nkà na ụzụ ọhụrụ ghọrọ usoro ọhụrụ format ghọọ ihe na-ewu ewu ruru mma àgwà nke ụda.
Gịnị mere VLC adịghị egwu Midi?
VLC a maara na-akwado ọtụtụ formats dị taa, ma n'ụzọ ụfọdụ ọ elefuruwo Midi faịlụ, nke siworo n'ebe ruo ọtụtụ iri afọ. Ọtụtụ ndị na-eche ihe mere na ọ bụ otú ahụ. Anyị ka na-ahụ Midi faịlụ a, na-maka obere music faịlụ na E na ọbụna na ọtụtụ mma media faịlụ formats gburugburu, ha na-gụnyere dị ka akụkụ nke codec ngwugwu na VLC.
E nweghị kpọmkwem ihe mere si VLC ma ọtụtụ ndị ọkachamara kweere na ọ bụ na-eme na oge ochie ọdịdị nke Midi. Mgbe akpọ Midi faịlụ, VLC kwesịrị sf2 (SoundFont) faịlụ n'ihi a Midi faịlụ adịghị agụnye music n'onwe ya. Midi faịlụ naanị agụnye olu, tempo, pitch, ike ọsọ, akara mgbaàmà parameters na ọtụtụ ndị ọzọ. Nke a SoundFont bụ fọrọ nke nta ẹdude ezigbo ngwá dị ka wavetable si ochie soundcards. Nke a sf2 nwere ike ịbụ nke ọtụtụ GBs, nke ga-abụ a nnukwu nsogbu maka ijikwa mgbasa ozi faịlụ. Ọtụtụ ihe ọ bụ rudimentary nke naanị bụ iji na-agụnye codec na mgbasa ozi ọkpụkpọ.
Ọtụtụ ndị gbalịrị ịchọta plugins ma ọ bụ atọ ọzọ software, nke nwere ike ikwe ka Midi playback, ma ihe niile bụ nnọọ a hoax, na ihe ọ bụla ịga nke ọma mara.
Ndị kasị mma VLC nnyemaaka
Na ị ka chọrọ iji VLC na-egwu anyị Midi faịlụ mgbe ahụ, ọ ga-abụ ezigbo echiche iji tọghata ya ka a na-akwado usoro na mgbe ahụ na-egwu ya na VLC. Wondershare Video Ntụgharị Ultimate bụ otu n'ime ihe kasị ike na irè video Ntụgharị na ahịa. Ọ na-akwado niile formats dị taa na mmepe na-software emelitere na ọhụrụ formats.
Nke a software ga-a lifesaver bụrụ na ị chọrọ igwu Midi faịlụ na VLC. Ọ bụ ezie na ị gaghị na-akpọ Midi format, na converted format ga-abụ nke otu àgwà dị ka Video Convertor Ultimate adịghị degrade ma ọ bụ ịgbanwe faịlụ n'ụzọ ọ bụla.
Olee otú Play RTMP Files na a VLC Media Player?
> Resource> VLC> Olee otú iji Play MDI Audio Files na VLC?